यौन स्वास्थ्य :: Nepal Post Dainik यौन स्वास्थ्य | Nepal Post Dainik
एजेन्सी एक अध्ययनअनुसार स्त्रीले आफ्नो जीवनमा फरक–फरक खालको यौन अनुभव गर्न चाहान्छन् । उनीहरु यौनका विषयमा धेरै नै अनौंठा कुराहरु सोच्ने गरेको पनि अध्ययनको निष्कर्ष छ । जस्तैः चरम सन्तुष्टि, आसन, यौनिक अभ्यासलगायत थुप्रै थप यता
काठमाडौं । पहिलो पटक यौनसम्बन्ध राख्ने उमेर कुन हो ? यसबारे किशोरावस्थामा संसारभरि सबैमा उत्सुकता र अन्योल छ। नेपाल र पूर्वीय संस्कृतिमा विवाहपूर्व यौनसम्पर्कलाई स्वीकार्य मानिँदैन। पाश्चात्य समाजमा भने त्यस्तो कुनै थप यता
दुनियाँ पनि अचम्म अचम्मको छ । नेपाल, भारत लगायतका देशमा पुरुषले बलात्कार गरेर अत्याचार गरेका खबरहरु दिनहुँ जसो सार्वजनिक भैरहन्छन् तर यूरोपको एक देशमा भने महिला नै बलात्कारमा अगाडी छन् । पपुवा न्युगिनीमा एउटा यस्तो गाउँ छ थप यता
१. गोलभेंडा : गोलभेंडालाई रातो रंगमा बदल्ने लाइकोपिन नामक तत्वले मानिसमा यौनइच्छा बढाउन सहोग गर्दछ । यसले पुरुषमा प्रोस्टेट क्यान्सरको खतराबाट पनि जोगाउँछ । २.पालुङगो : पालुङगोको साग नियमित सेवन गर्नाले यौनक्षमतामा थप यता
एजेन्सी ।स्तनको स्पर्शले महिलाहरुमा यौन आनन्द प्राप्त हुन्छ । अर्थात् महिलाहरुको यौन उत्तेजनामा योनी जति संवेदनशील हुन्छ स्तनको टुप्पो पनि त्यस भन्दा कम हुँदैन । हुनत यो यथार्थ जान्ने र भोग्नेहरुले थाहा पाएकै कुरा हो । तर थप यता
यी हुन् यौनशक्ति बढाउने खाना, दैनिक आफ्नो भोजनमा समावेश
जब एक पुरुष र महिला नजिकिन थाल्छन्, तव उनीहरुबीच प्रेम हुन्छ र वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिन्छन् । विवाह भनेको दुई मनको मात्र हैन, तनको संगम पनि हो । वैवाहिक जीवनमा बाँधिएपछि श्रीमान्-श्रीमती दुबैले एक-अर्कालाई माया, प्रेमसंगै शरीर थप यता
के हो तान्त्रिक यौन, जानी राखौं
तान्त्रिक यौन, अलि भिन्न लाग्न सक्छ यो सन्दर्भ । वास्तमा यो यौनको कुनै अनौठो गतिविधि भने होइन । यसको लक्ष्य के मात्र हो भने, तपाईंका पार्टनरलाई आध्यात्मिक एवं गहिरो तरिकाले सम्झाउन बाहेक अरु कुनै गतिविधि नहोस् । यसको उदेश्य थप यता
कुन समयमा यौन सम्पर्क गर्दा गर्भ रहदैन ? जानी राखौं
एजेन्सी : गर्भ रहन धेरै कुराको तालमेल मिल्नुपर्छ । कतिपय स्थितिमा पहिलो वा एक पटक मात्र यौनसम्पर्कमा नै गर्भ रहन्छ,तर सधैँ यस्तो हुँदैन । यौनसम्पर्कका बेला पुरुषको वीर्यस्लखलन हुँदा निस्किएका करोडौं शुक्रकीटमध्ये केही थप यता
महिलामा यौन इच्छा भएपछि देखाउने ५ व्यवहार !
संसारभरी नै एउटा मान्यता छ महिलालाई बुझ्न कठिन हुन्छ । केटीहरु कम बोलेर धेरै कुरा भन्छन् । पुरुषले महिलाका कुरा केवल बोलीबाट मात्र बुझ्न सक्दैनन् । उनीहरुको ब्यवहार पनि बुझ्नु महत्वपूर्ण हुन्छन् । महिलाले यौनिक चाहना पनि थप यता